सर्वत्र फुटबल ‘पागल’ हरू ! « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
सर्वत्र फुटबल ‘पागल’ हरू !
३१ जेष्ठ २०७१, शनिबार ०६:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ३१ जेठ । सर्लाहीको लालबन्दीमा ब्राजिलको जर्सी लगाएको पहेंलपुर समूहले मोटरसाइकल र्‍याली गरेर चुनाव प्रचारको झल्को दिलायो । अर्को समूहले पनि यस्तै र्‍याली निकाले झडपसमेत हुन सक्छ भन्नेमा प्रहरी सतर्क थियो ।
काठमाडौंका सडकमा विश्वकप खेल्ने टिम, खेलाडीको जर्सी लगाउने प्रशस्त छन् । सामाजिक सञ्जाल जर्सीकै तस्बिरले भरिएका छन् । विश्वकपमा खेल्ने सम्भावना दूर-दूरसम्म नदेखिएको नेपालमा यसको मोह र उत्तेजनाचाहिँ अदम्य छ । ‘घरमै फाइट पर्ला भन्ने डर पो भयो,’ शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भने, ‘घरमा बूढाबूढी र छोरी ब्राजिल पक्ष, छोराचाहिँ अर्जेन्टिनाको कट्टर समर्थक ।
‘अर्को विश्वकपमा त घरमै महाभारत हुने देखिसके,’ इंग्ल्यान्ड समर्थक समीरमणि दीक्षितले ट्विटे, ‘जेठी छोरी ब्राजिल समर्थक, अर्की अर्जेन्टिना ।’ बत्तीसपुतलीका सुनिल चालिसेले आफू ब्राजिलको परम्परागत समर्थक भए पनि छोरा र छोरी अर्जेन्टिनाको समर्थक, अनि मेस्सीको फ्यान भएको सुनाए । ‘अर्जेन्टिना र ब्राजिल भिडे भने त धर्मसंकट हुने भो,’ उनले सुनाए, ‘आफूखुसी हुँदा छोराछोरी दुःखी हुने आफ्नो दुःखमा छोराछोरी खुसी हुने ।’
परिवारै आएर फरकफरक जर्सी किन्ने गरेको नयाँ बानेश्वरस्थित स्पोटस युनिभर्सका सञ्चालक दीपक विष्ट (तेक्वान्दोका पूर्वखेलाडी)ले सुनाए । जर्सीमा युवतीको मोहले आफैं छक्क परेको उनले बताए । ‘जर्सीसहित फरकफरक टिमको समर्थन गर्दै फुटबल हेरे पनि परिवारमै झगडाचाहिँ परिनहाल्ला कि,’ उनले भने ।
समर्थनको कारण कोही कसैसँग नजिकिने र टाढिने अवस्थासमेत देखिएको छ । ‘बाटोमा एक स्पेनको जर्सी लाएर बाइकमा कुदिरहेको रहेछ,’ लछुमनले ट्विटे, ‘रोकेर हल्का स्माइल दिएर गयो ।’ रविश शर्माले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको टाइमलाइनमै झगडा छताछुल्ल भएको भन्दै नेपालको खेलले एकजुट गराएथ्यो, विश्वकपले फुट गरायो भनेर ट्विटेका ।
राजधानीका कतिपय घरमा दसैंमा नयाँ लुगाजस्तो हरेकले जर्सी खरिद गरेका छन् । जर्सीको व्यापारले बजार तताएको छ । राजधानीका कतिपय स्कुलले ‘स्पोर्ट्स ड्रेस’ लगाउने दिनमा जर्सी लगाउन अनुमति दिएकाले व्यापार झन् फस्टाएको छ । साथीले जर्सी लगाएपछि केटाकेटीले जर्सी किन्न अभिभावकलाई दबाब दिए । टी-ट्वान्टी विश्वकपमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेसँगै खेलप्रतिको क्रेज ह्वात्तै बढेको विष्टको अनुमान छ ।
उनका अनुसार ढाकामा सम्पन्न टी-ट्वान्टी क्रिकेट विश्वकपमा आफ्नो मुलुक खेलेकाले धेरै नेपाली जर्सी लगाउन लालयित भए । ‘आफ्नो मुलुकका लागि जर्सी लगाएपछि समर्थन गर्ने टिमको पनि जर्सी लगाउने लहर चल्यो,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट